Thwebula TeamTalk 5.4 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: TeamTalk
TeamTalk – a isofthiwe yakhelwe ukuxhumana on the internet. Isofthiwe ikuvumela ukuxhumana in video inkomfa mode bese amise avikelwe yokukhulumisana sessions emkhatsini ababambiqhaza. TeamTalk kwenza ukulanda amafayela ezinkulu futhi uyoyifeza exchange of idatha. Isofthiwe ikuvumela ukudala leseva sakho siqu nge isethi esikhulu amathuluzi ukunciphisa amalungelo umsebenzisi. TeamTalk futhi isekela ikhono ukuqopha izingxoxo kwidiski yakho eqinile kanye ezithwala ehlukahlukene idatha.
Voice namavidyo wokukhulumisana
Ikhono lokukhulumisana in kunethiwekhi yendawo
Yakha bese uxhuma kwiseva
Ukuqopha of ingxoxo
Amazwana ku TeamTalk
TeamTalk software ehlobene
IETester – ithuluzi lokusebenza ngesiphequluli se-Internet Explorer. Isoftware ikuvumela ukuthi uhlole ukuhambisana kokuziphatha kwekhodi, ukwakheka, kanye nokuklama ezinhlotsheni ezahlukahlukene zesiphequluli.
Ukuthola ukuthandwa komthengi ukuxhumana engxoxweni. Isofthiwe inesethi yezinto ezisetshenziselwa amanethiwekhi omphakathi.
A software ukwenza ngcono ukuxhumana internet ngokwenza izinguquko ezidingekayo ukuze izilungiselelo of the modem nezinye inethiwekhi modules.
Lena imenenja yefayili yefasitela ezine esekela imisebenzi eyisisekelo ukuphatha amafayela nokuwahlela ohlelweni ngezidingo zomuntu siqu.
Ezicijile – isoftware yokuhlela izithonjana zedeskithophu ngokuzifaka ezigabeni ezahlukahlukene. Isoftware inika amandla ukwenza ngokwezifiso ukubukeka kwebhulokhi nezithonjana ngezidingo zomsebenzisi.